Uzbekistan dia manitatra ny fameperana COVID-19 'mandra-pivoaran'ny toe-javatra'
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Ozbekistan » Uzbekistan dia manitatra ny fameperana COVID-19 'mandra-pivoaran'ny toe-javatra'
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao Mafana Ozbekistan • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny 12 Jolay, Ozbekistan dia nanoratra tahirin'ny aretina coronavirus 116,421 niaraka tamin'ny fanarenana 111,514 na 96% ary fahafatesan'ny 774.
Voarara ny fidiran'ny fiara mandeha fiara mankany Tashkent.
Ny alim-pandihizana, efitrano fanaovana pisinina, foibe filalaovana solosaina ary toeram-pisakafoanana ampahibemaso dia avela miasa manomboka amin'ny 08:00 ka hatramin'ny 20:00 ora eo an-toerana.
Ny toerana fisakafoanana sy fialamboly dia tsy feno mihoatra ny 50% amin'ny fahafaha-manao rehetra.
Sekretera an'ny UzbekistanNy Minisitry ny Fahasalamana, Furkat Sanaev, dia nanambara androany fa ny fameperana ny quarantine nampidirina tao amin'ny repoblika Azia afovoany tamin'ny 1 Jolay nandritra ny 12 andro dia nitarina mandra-pahatongan'ny ' Covid-19 mihatsara ny toe-javatra. '
"Araka ny fanapahan-kevitry ny vaomiera manokana, nanomboka ny 1 Jolay, dia voafetra ny fidirana fiara mandeha fiara mankany Tashkent, amin'ny faritany manontolo amin'ny repoblika, ny klioban'ny dihy sy karaoke, ny efitranon'ny pisinina, ny foibe filalaovana solosaina ary ny toeram-pisakafoana ampahibemaso dia avela hiasa avy amin'ny 08:00 ka hatramin'ny 20:00 ora eo an-toerana amin'ny fepetra tsy hamenoana azy ireo mihoatra ny 50% amin'ny totalin'ny fahafaha-manao. Ireo fameperana ireo dia hijanona mandra-pivoaran'ny toe-javatra epidemiolojika ", hoy ny mpitondra teniny.
Nanampy koa i Sanaev fa tsy tokony hatoky ny fampahalalana navoaka tao amin'ny tambajotra sosialy sy ny haino aman-jery an-tserasera sasany fa nesorina ny fameperana ny quarantine.
"Ny sampan-draharahan'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana dia hanao tatitra momba ny fanafoanana azy ireo na ny fanitarana fanampiny," hoy izy.
Ny quarantine dia nambara tamin'ny Uzbekistan ny 1 aprily tamin'ny taon-dasa miaraka amin'ny fampidirana an-tsokosoko ny saron-tava fiarovana sy ny fanalavirana ny fiaraha-monina. Ny fitondrana mitoka-tena dia nambara tao Tashkent sy ny foibem-paritra rehetra, naato ny fifandraisan'ny fitaterana amin'ny firenena rehetra. Nakatona ny akaninjaza raha nifindra tamin'ny fianarana lavitra ireo andrim-panabeazana.
Tamin'ny faran'ny taona 2020, ny tranga areti-mandringana tany Uzbekistan nilamina ary nesorina tsimoramora ny famerana ny quarantine nanomboka ny volana martsa tamin'ity taona ity. Naverina tamin'ny firenena maro ny serivisy an'habakabaka, navela ny fidiran'ny mpizahatany vahiny, ny fitondrana mitokantokana ary nesorina ny fameperana rehetra momba ny fialamboly sy ny fisakafoanana.
Na izany aza, tamin'ny voalohan'ny volana Mey dia niharatsy indray ny toe-javatra epidemiolojika ary nanomboka nanamafy ny fameperana ny komisiona manokana nanomboka ny 1 Jolay.
Tamin'ny 12 Jolay, ny repoblika Azia afovoany miaraka amin'ny mponina maherin'ny 34.5 tapitrisa dia nanoratra aretina 116,421 tamin'ny virus coronavirus izay nahitana 111,514 na fanarenana 96% ary olona 774 maty.